DEG DEG: Deni oo ka dagay Kismaayo, jabiyeyna Cunaqabateyntii, Afkana furtay. - Banaadirsom
Home Arimaha Bulshada DEG DEG: Deni oo ka dagay Kismaayo, jabiyeyna Cunaqabateyntii, Afkana furtay.
DEG DEG: Deni oo ka dagay Kismaayo, jabiyeyna Cunaqabateyntii, Afkana furtay.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo ka hadlayay shir jaraa’id oo uu ku qabtay magaalada Kimaayo ayaa sheegay in uu maalmaha uu joogo Kismaayo la kulmi doono dhamaan arrimaha Jubbalandna uu kala hadli doonod adka madasha jooga.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Kismaayo ay kaga tashan doonaan sidii xal waara looga gaari lahaa kala aragti duwanaanshaha xagga siyaasadda ah, sidaas oo kale wuxuuna sheegay in ay midnimo rabaan ummadda Soomaaliyeed.
Siciid Deni ayaa sheegay in wax kasta oo yimaada ay tahay in wada hadal lagu dhameeyo, isagoo sheegay in ay rajo wanaagsan ka qabaan in ay xal ka gaaraan arrimaha ka jira gudaha Jubbaland.
Madaxweynaha Puntland wuxuu kaloo cadeeyey in ay dhinacyada oo dhan ka wada hadli doonaan geedi socodka siyaasadeed ee cakiran ee dalka, ayna filayaan in ay natiijo wanaagsan ka soo baxdo magaalada Kismaayo.